Filtrer les éléments par date : mercredi, 06 mars 2019
mercredi, 06 mars 2019 21:21
Fanondranana entana: Sahirana ireo mpandraraha
Misedra olana ireo mpandrahara mpanondrana entana vokatry ny fambolena (ala) manoloana ny naoty sy fepetra navoakan’ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosona lovain-jafy, Alexandre Goerget ny 29 janoary 2019 teo.
Raha azo ahondrana ny lodsia, lavanila, dipoavatra mbamin’ny cacao dia voarara noho io taratasin’ny minisitra io ny manodrana vokatra toy ny dipoavatra mainty, ravina centella sy ravintsara efa nokarakaraina manokana nohamainina.
mercredi, 06 mars 2019 20:09
Gilet Jaune: Voatsongo sofina i Lafrantsa
Nisintona lakolosy amin'ny fampiasan-kery tsy manaja ny zon'olombelona ataon'ny Lafrantsa, ny Kaomisera avo momba ny zon'olombelona eo anivon'ny Firenena Mikambana. Takian'i Michelle Bachelet, Kaomisera avo nandritra ny fivoriam-be tany Geneve, ny fanokafan'ny Lafrantsa fanadihadiana momba ireo fampiasan-kery ataon'ny polisy amin'ireo mpanao fitokonana Gilet Jaune, ary hisian'ny fifanantonana sy fifampiresahana.
Ity hetsiky ny Gilet Jaune ity moa dia nanomboka tamin'ny fitakiana ny fidinan'ny vidi-tsolika, ary nihitatra amin'ny fitakiana ny resaka vidim-piainana, eny nisy mihitsy aza ny nitaky ny fialan'i Filoha frantsay Emmanuel Macron.
mercredi, 06 mars 2019 19:53
Lettre adressée au Ministre du transport (et au Président de la République).
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir vous pencher sur la situation du port de Vohemar. En effet voila maintenant 5 mois que le navire porte conteneur de Cma Cgm n'a plus fait escale au port de Vohémar. Il en résulte une flambée des prix de toutes les denrées alimentaires, marchandises et matériaux de construction car il y a constamment une situation de pénurie faute d'approvisionnement suffisant.
Pour vous donner un ordre d'idée, le sac de riz est à 100.000ar, le sac de ciment à plus de 40.000ar, l'huile bidon 20l à 80.000ar...
mercredi, 06 mars 2019 19:21
Bemanevika – Sambava : Tsy maintsy mitondra kitay in-droa isan-kerinandro ny mpianatry ny EPP
Tany Ambatojoby ZAP Bemanevika no nahitana fa tsy maintsy mitondra kitay ny ankizy mpianatry ny EPP isaky ny Talata sy Zoma maraina.
Samy amin'ny fitsinjirany avokoa izany, ka ny T2 mitondra kitay roa, ny T3 dia telo ary T4 dia efatra ary ny T5 mitondra kitay dimy isan’ankizy, ary isaky ny Talata sy ny Zoma io.
Maro ny sekolim-panjakana any ambanivolo ahitana tranga toy izao hanampiana ny talen-tsekoly mba hanana fotoana hifantohana amin'ny fampianarana fa tsy ny kitay intsony no ho sakana, ary matetika natao ihany koa mba hanabeazana ny ankizy koa rehefa lehibe izy mba ho zatra manao asa aman-draharaha fa tsy ho kamo lahy na kamo vavy.
mercredi, 06 mars 2019 19:09
Sambava: Tranombarotra lehibe iray notafihina andian-jiolahy
Nisy nanafika ny tranombarotra lehibe iray teto Sambava ny alin’ny sabotsy 2 martsa teo. Andian-jiolahy miisa fito izy ireo raha ny hita sy voarakitra tao anaty “caméra de surveillance” ary efa ifampitadiavana amin'izao iarahana amin'ny mpitandro filaminana.
Jean Aimé: Hirotsaka hofidiana depiote aty Marovoay
Hiditra an-tsehatra amin’ny politika i Jean Aimé na Jean Aimé de Bemaharivo ahafantarana azy amin’ny maha mpanakanto eo amin’ny tontolon’ny hira. Hirotsaka hofidiana solombavambahoaka aty Marovoay izy, ary efa manoman-tena fatratra hiatrika ny fifidianana hotontosaina amin’ny 27 mey 2019.
Efa namoaka depiote mpanakanto i Marovoay taloha, dia i Rajaonson Bruno dit Brun-Ly.
mercredi, 06 mars 2019 14:54
Vohiparara à l'entrée de la Commune rurale RANOMAFANA
mercredi, 06 mars 2019 13:17
Lalam-pirenena faha-31, 32, 5A: Mampitaraina ny olona ny haratsian-dalana
Zary mitoka-monina tsy fidiny ny mponina any Bealanana, Mandritsara ary SAVA noho ny haratsian-dalana, indrindra amin’izao vanimpotoana fahavaratra mahabe rotsakorana izao. Lany vola sy fotoana ny mpampiasa lalana. Tsy tafavoaka ny vokatra, etsy ankilany midangana ny vidim-piainana.
Na ny fiara tsy mataho-dalana aza lahoana vao tafavoaka amin’ny lalam-pirenena faha-31, mirefy 129 km eo, mampitohy an’Antsohihy amin’i Bealanana ; toy izany koa ny lalam-pirenena faha-32, mirefy 200km eo, mampitohy an’Antsohihy amin’i Mandritsara, ary ny lalam-pirenena faha-5a, mampifandray an’Ambilobe amin’ny Antalaha.
mercredi, 06 mars 2019 13:00
Jirama: Hitokona manomboka rahampitso ireo mpisan'ny jirama
Hitokona manomboka rahampitso alakamisy 07 marsa ireo mpisan'ny jirama izay tarihin'ny sendika miisa sivy.
Anisan'ny fitakian'izy ireo ny fialan'ny Tale Jeneraly noho ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana sy fanorenana ny orin'asa.
Ao ihany koa ny fitakiana ny hamerenana ireo mpiasa tokony haverina amin'ny asany nefa mbola tsy tafaverina.
Eo koa ny resaka fifanarahana, sady tsy mazava no miompampana ny vidiny amin'ireo mpampanofo giropy sy ireo kojakoja famokarana herin'aratra.
mercredi, 06 mars 2019 12:53
Fambolen-kazo: Nanatanteraka ny adidiny ny fianakaviamben’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana
Tamin’ny tany miaramila mirefy 1ha eny Tamponketsa PK 125, lalam-pirenena fahefatra no nanatanterahan’izy ireo izany ny zoma 01 martsa 2019.
Nilaza ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, Jean-Eric Rakotoarisoa fa « tsy tokony hionona amin’ny fambolen-kazo tsotra fotsiny isika eto amin’ny firenena fa tokony ho rakofana ala mihitsy ny firenena. Izany no atao dia satria efa tena simba ny tontolo iainana ».
Fiaraha-miasa amin’ny Miaramila eny an-toerana ny fanaraha-maso ny asa.